Ihlole izikhali zayo iNorth Korea kwakhathazeka i-USA - Bayede News
Ihlole izikhali zayo iNorth Korea kwakhathazeka i-USA
by Anathi Mtaka
UMtaka ungumbhali wezindaba zamazwe neMeneja kwi-Igunundu Agency.
UMnyango ube nesandla ekuhlengeni isibhakela eKZN
Ngesonto eledlule leli lizwe, iNorth Korea, lidubule imicibilisholomlilo emibili olwandle lwaseJapan, lokhu kushiwo nguNdunankulu waseJapan.
Lesi senzo sibhebhethekise ukungezwani phakathi kwala mazwe ngaphambi kweTokyo Olympics futhi sikhuphule ingcindezi embusweni omusha wase-USA kaMengameli uJoe Biden (osesithombeni).
I-UN Security Council yakhipha isinqumo sokuthi iNorth Korea ayivumelekile ukuhlola le micibisholomlilo okuchaze ukuthi isenzo seNorth Korea sizoletha inselelo entsha emzamweni kaMengameli uBiden yokuxhumana neNorth Korea.
Lokhu kudubula kuqongisa usongo lohlelo lwezikhali olungekho emthethweni lwaseNorth Korea komakhelwano bayo kanye namazwe omhlaba, kusho i-United States Military’s Indo-Pacific Command esitatimendeni esikhiphe ngesonto eledlule.
I-Indo-Pacific Command ithe isiqaphile isimo futhi iyabonisana nozakwabo. IJapan yafaka isikhalo esisemthethweni ngehhovisi lenxusa layo eliseChina lapho yathi loku kuhlolwa kwale micibilisholomlilo kubeka engcupheni ukuthula kanye nokuphepha kulesi sifunda, kwathi iSouth Korea National Security Council yazwakalisa ukukhathazeka okukhulu ngalesi senzo seNorth Korea.
UHulumeni waseJapan uthe umcibilisholomlilo owodwa undize amakhilomitha angama-450 wawela ngaphandle kwendawo yezomnotho ekhethekile yaseJapan obekukhombisa ukuthi bekuwumcibilisholomlilo webanga elifushane.
“Ukudutshulwa kwale micibilisholomlilo esikhathini esingaphansi konyaka kubonisa usongo lokuthula nozinzo eJapan nasesifundeni futhi kwephula izinqumo ze-United Nations,” kusho uNdunankulu waseJapan uYoshihide Suga ephawula ngalolu daba.
Ukukhwabaniswa kwezimali kwa-UIF
Ukudutshulwa kwale micibilisholomlilo kuhambisane nokuqala kokuhanjiswa kwethoshi lama-Olympic ngoLwesine obesekubika ukubalwa kwezinyanga ezine zokuthi iqale le midlalo eToyko eyabambezeleka ngonyaka odlule ngenxa yokhuvethe.
UNdunankulu uSuga uthe uzoqinisekisa ukuthi le midlalo iphephile aphinde “akhulume kabanzi” ngezinto ezihlanganisa iNorth Korea uma esevakashele uMengameli Biden eMelika ngenyanga ezayo.
Onogada basogwini eJapan baxwayise imikhumbi ukuthi ingasondeli kunoma yiziphi izinto ezibunjiwe futhi bacela ukuthi babanikeze imininingwane uma kukhona abakubonayo.
Anathi Mtaka Apr 2, 2021